लोकल भाले कुखुराको परिवार नियोजन ! Video – Sero Fero News
Home/Trending News/लोकल भाले कुखुराको परिवार नियोजन ! Video
लोकल भाले कुखुराको परिवार नियोजन ! Video
October 17, 2019	Trending News, प्रदेश ५ Leaveacomment 195 Views
पाल्पा, स्थानीय जात भनेर चिनिने लोकल भाले कुखुराको बन्धाकरण गरि व्यावसायिक कुखुरापालन गर्दा दुई गुणा बढी आम्दानी हुन थालेको छ । माथागढी गाउँपालिका–२, रुप्सेका टर्की र हाँस पालन गर्दै आएका युवा तारा प्रसाद पाण्डेले भालेको बन्ध्याकरण गरि लोकल कुखुरापालन सुरु गरेका छन् ।
अहिले ताराको माडी टर्की तथा पंक्षी फार्ममा तीन सय बढी स्थानीय जातका कुखुराहरु छन् । जसमध्ये केहीलाई उनले बन्ध्याकरण गरिसकेका छन् । लोकल भालेको बन्ध्याकरण गर्नकै लागि उनले दाङबाट सहयोगी समेत ल्याएका छन् । कुखुराको बन्ध्याकरण सफल भएपछि पाण्डेले अहिले टर्कीपालनलाई कम गर्दै व्यवसायिक लोकल कुखुरापालनमा लागेका छन् । उनी भन्छन्, ‘कुखुराको अण्डकोष निकाल्ने हो । बन्ध्याकरणको तरिका अनुसारनै अण्डकोष निकाल्दा कुखुराको तौलमा निकै वृद्धि हुन्छ । कुखुरा पोथीसँग पनि लाग्दैन । अरुको तुलनामा स्वस्थ्य पनि हुँदो रहेछ, पाण्डेले भने, भालेको शीर पनि काट्ने गरेका छौं । भाले चिल्लो र मोटो हुन्छ । पाँचदेखी छ महिनामै तौल पनि ३ देखि ५ किलोसम्म हुन्छ ।’
हाँस र टर्कीपालन गर्दै आएका पाण्डेले अहिले स्थानीय जातको कुखुरा व्यावसायिक रुपमा पालेका छन् । गाउँका विभिन्न घरघरमा पुगेर ल्याएका भालेलाई आफुसँग रहेका अन्य कुखुरासँग क्रस गराई नयाँनयाँ जातको आँफै विकास गरेका छन् ।
कुखुराको भालेको पछाडिको भागबाट शल्यक्रिया गरी अन्डकोष निकालिन्छ । अन्डकोष निकालेको भालेको शीर काटेर पोथीजस्तो बनाईन्छ । बास्न सुरु गरेको भालेको अन्डकोष निकाल्दा बास्न छाड्छ । भालेको बन्ध्याकरण गर्दा मासुको उत्पादन बढी हुने गरेको छ । यसअघि पनि जिल्लाको रामपुर नगरपालिकाका जनार्दन पन्तले आफ्नो फर्ममा भालेको बन्ध्याकरण सफल गराएका थिए । दाङ जिल्लामा यस अघि नै ‘बँदिया’ भाले गराई बिक्रि हुँदै आएको पाईन्थ्यो ।
Previous ५० वर्षदेखी अखण्ड भजनकिर्तन गर्दै चापपानीबासी (भिडियाे)
Next प्रधानमन्त्री ओली आज अजरबैजान जाँदै